Ungazilungisa njani iinwele ngomgubo wengqolowa | IBezzia
UToñy Torres | 22/07/2021 20:00 | Ubuhle
Ukuba ujonga indlela yendalo yokulungisa iinwele zakho ngaphandle kokusebenzisa iikhemikhali kunye nezixhobo zobushushu, umgubo weMaizena ngowakho. Imveliso ekulula ukuyifumana, engabizi kakhulu kwaye igqibelele ukuyisebenzisa njengesigqubuthelo seenwele. Ngenxa yeepropathi zayo ezininzi, iluncedo ngenene kwimpilo yeenwele. Phakathi kwezinye izinto, umgubo wengqolowa okanye isitatshi sengqolowa siqulathe i-iron, iivithamini kunye neeminerals.
Zonke zizinto ezinesondlo kunye nee-antioxidants ezivumela ukuphucula ubume be-capillary ukuba isetyenziswa ngaphandle. Oko kukuthi, xa ufaka ingqolowa kwingwele yakho, oku izibonelelo kuzo zonke iipropathi zesondlo zoku kutya. Yintoni evumela ukondla iinwele ezivela ngaphakathi, ukuba zithambe, zithintele ngakumbi, kuphelise ukungunda kwaye kuququzelele ukudibanisa.
1 Isigqumathelo seCornstarch ukulungisa iinwele
1.1 I-cornstarch kunye nobusi imaski yokulungisa iinwele
1.2 Ndihlala ndiyisebenzisa kangaphi imaski?
Isigqumathelo seCornstarch ukulungisa iinwele
Umgubo wombona okanye isitatshi sombona singasetyenziswa ngezithako ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwisiphumo ofuna ukusifumana. Ukuba ujonge ukuphucula iinwele ezonakaliswe kukutsha okanye izixhobo zokufudumeza, kuyakufuneka udibanise isitatshi sombona kunye nezinye izithako. Ukusukela, nangona I-cornstarch yodwa inceda ukunciphisa i-frizz, ngokwayo ayinayo ipropathi ye- ukulungisa iinwele.
Ukufezekisa le njongo, kufuneka silungiselele imaski esekwe kumbona wesitatshi esidityaniswe nezinye izinto. Kukho iindlela ezininzi kwaye zonke zineziphumo ezilungileyo, nangona kukho umahluko ngokuxhomekeke kuhlobo lweenwele. Ukuba une-curly mane mane, I-Cornstarch iya kukunceda ube nokuthamba kwaye kube lula ukudibanisa iinwele. Nangona kunjalo, kwimane ene-curl engachazwanga kakuhle, iziphumo ziya kuba nomtsalane ngakumbi.
Qaphela izithako oza kuzifuna kule maski yobusi bembona. Indibaniselwano yezondlo zendalo oya kuthi uphumeze ngayo umlo owomeleleyo, othambileyo, ocwebezelayo kunye nento obuyikhangela, iinwele ezithe tye ngokwendalo.
I-cornstarch kunye nobusi imaski yokulungisa iinwele
Ukulungiselela le mask yokulungisa iinwele kuya kufuneka ezi zinto zilandelayo. Thatha inqaku elifanelekileyo, kodwa ukuba awukwazi ukufumana ioyile yekhokhonathi, ungayifaka endaweni yeoyile ye-olive eyintombi.
Iipuniwe ezi-4 zomgubo umbona
Iipuniwe ezi-3 imayela
Iipuniwe ezi-2 ioli yonkcocon
Ukulungiselela imaski kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo.
Kuqala xuba ingqolowa kunye namanzi abandayokungenjalo ayinakunyibilika.
Phalaza umxube epanini kwaye yizise kubushushu obuphantsi. Gcina rhoqo ude ufumane unobumba ngejeli.
Fudumeza ioyile yekhokhonathi kwimicrowave imizuzwana embalwa ukuze ihlale ilulwelo.
Kwisitya esikhulu, xuba zonke izithako ude ufumane imaski ekhrimu. Kuya kufuneka ibe nokungaguquguquki ukuze ikwazi ukuwusebenzisa kwizinwele.
Vumela imaski ifudumale ngelixa uhlamba kakuhle iinwele zakho.
Faka lo mxube kwizinwele zakho, ngaphandle kokuhlamba, strand by strand de yonke le mane igutyungelwe.
Vumela i-cornstarch kunye nobusi imaski yenza imizuzu engama-30 okanye engama-40.
Ukugqiba, hlamba iinwele ngamanzi ashushu kwaye uhlambe iinwele zakho ngesiqhelo.
Ndihlala ndiyisebenzisa kangaphi imaski?
Kubalulekile ukuphinda inkqubo amaxesha ngamaxesha, kuba kungoko kuphela apho uya kuthi ube nakho ukuxabisa iziphumo. Ingakumbi ukuba wonakele okanye womile kakhulu iinwele. Faka isicelo se-cornstarch kunye nemaski yobusi phakathi kwama-2 kunye namaxesha ama-4 ngeveki kwaye uyokonwabela iinwele ezithambileyo, ezinganyangekiyo, nezilula kwaye ngokugudileyo okungathethekiyo. Ukuba uneenwele ezinamafutha okanye unengxaki yokuqhabalaka entlonzeni, kuphephe ukufikelela kwiingcambu zeenwele xa ufaka imaski.
Njengeqhinga lokugqibela, ukuba ufuna ukubonisa umane okhazimlayo, ogudileyo nothambileyo ngaphandle kokusebenzisa izixhobo zobushushu, tshintsha i-cornstarch kunye nemaski yobusi ngale ndlela ilandelayo. Hlanganisa iipunipoon ezi-4 ze-starch corn kunye neeglasi ezi-2 zobisi lwekhokhonathi. Dissolve umgubo kunye nobushushu de ufumane i-creamy paste. Ukuba uneenwele ezinde kakhulu okanye iinwele ezininzi, ziphindaphinde ezo mali.
Nje ukuba imaski ilungile, faka kwiinwele ezomileyo nezomelele kakuhle. Yishiye iyure kwaye ugqibe ngokuhlamba ngamanzi afudumeleyo, Hlamba iinwele zakho ngesiqhelo kwaye uzivumele zome umoya. Zonke ezi zithako zendalo ziya kukunceda ubonise imane entle, enomzimba kunye nobume obugqibeleleyo bokulungela nangaliphi na ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ungazilungisa njani iinwele ngomgubo wengqolowa
Ihlobo lijonga iStradivarius ongafanele uphoswe yiyo